China P&M nyanzvi yekuyedza chubhu yekugadzira fekitori Kugadzira uye Fekitori |P&M
P&M inyanzvi yekuyedza chubhu yekugadzira fekitori
Item Fekitari yakananga yepamusoro-yemhando yepurasitiki yebvunzo chubhu
Nzvimbo Yekwakabva China
Color Transparent, blue, yellow, orenji, tsvuku, yero, customizable
Feature Stocked, Sustainable
Material Chikafu giredhi PP
Supply Ability 50000 Piece / Zvimedu pazuva
Ruvara:Bhuruu, Yakajeka, inogoneka
Features:Inventory yakakwana, Sustainable
Material:Chikafu giredhi PP
Nguva Yekutungamira:1-7 mazuva
Feature:Inventory yakakwana, inogoneka
Logo:Customized Logo Inogamuchirwa
Product name:test tube
Iyi yepurasitiki yebvunzo chubhu ine chiyero chakajeka chakajairwa.Chivharo chine spiral, kujeka kwepamusoro, pasi pasi, kushandisa chikafu giredhi PP zvinhu zvine mhando yepamusoro yerabhoritari chipatara level.Saizi dzakasiyana uye mavara anogona kugadzirirwa iwe zvinoenderana nezvaunoda, semuenzaniso: 2ml, 5ml, 10ml;yero, girini, orenji, bhuruu, tsvuku.Parizvino, kambani iri muchikamu chekuwedzera nekukurumidza.Isu tinongogadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye tinokupa mitengo yakaderera.Isu tinotarisira kuzadzisa kubatirana kwenguva refu newe.Tinokwanisawo kugadzirisa kurongedza zvinoenderana nezvaunoda.
1) Isu tiri nyanzvi fekitori uye mhando.Tave tichiita mukugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki zvakasiyana-siyana uye molds epurasitiki kwemakore gumi nematatu, ane makumi matatu emagetsi ekugadzira mold, nyanzvi CAD, CAM, CAE tekinoroji uye yakakosha yekuyedza michina.
2) Tinogona kugadzira marudzi ese esirinji, zvinhu zvacho zvese giredhi rekudya, rakagadzirirwa iwe zvinoenderana nezvaunoda.
3) Tinogona kukupa masampuli emahara.Tine masaizi akawanda epurasitiki ebvunzo machubhu, akadai se: 2ml, 5ml, 10ml.Kana maererano nezvaunoda tsika yakagadzirwa.
5) Ndapota tiudzei ukuru uye ruvara rwaunoda, tinotarisira kushanda newe kwenguva yakareba.
Isu tiri fekitari yakananga, kana iwe uchifunga kuti saizi yedu iripo haina kukodzera, tinogona kugadzirisa saizi yakakukodzera iwe.Chero saizi, chero ruvara, chero chinhu, tinogona kuzviita.Ndapota usazeza kutibata nesu zvakananga.
One-stop sevhisi:3d dhizaini-3d kudhinda-kugadzira mold-jekiseni resirinji
Q2.Inguva yakareba sei yekufambisa sirinji?
A: Izvo zvinoenderana nehukuru uye ruvara.Kazhinji, nguva yekufambisa ndeye 3-5 mazuva.Kana iri saizi yenguva dzose, tinogona kushanda mukati memazuva maviri.
Q3.Pamberi pekutumira, ungave sei nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvemhando?
A: Paypal, Western Union, T/T, L/C zvinogamuchirwa, saka ingotizivisa kuti ndezvipi zvakakunakira.
A: Ehe, kune hombe kurongeka, mutengi wekare uye vatengi vanogara, tinopa zvine musoro kuderedzwa.
Q6.Nzira ipi yekutumira inowanikwa?
A: Negungwa kusvika pachiteshi chenyu chiri pedyo./ Nemhepo kuenda kunhandare yendege iri padyo newe.
Zvakapfuura: Professional customizable epurasitiki pipette
Zvinotevera: Professional customizable vatauri vakasiyana
Professional customizable akasiyana epurasitiki funnel
Plastic pipettes emhando dzakasiyana-siyana
Professional customizable akasiyana sirinji
P&M 1ml 2ml 2.5ml 6ml 7.5ml 8ml 9ml Kusiyana...